Maalinta: Juun 24, 2017
Iftar dhaqameedkii hore ee EGO: Ankara Magaalo-weynaha Magaalo Weyn EGO Agaasimeyaasha Waaxda Maareynta Basaska ayaa u soo ururay cashada Iftar. Maareeyaha guud ee EGO Balamir wuxuu ka qeyb galay cashadii afurka oo caadiyan la qabto Ramadaan kasta. [More ...]
Wasiirka Gaadiidka Arslan 'Ciid Ciidul Fitriga: Muwaadiniinta qaaliga ah, Asxaabta qaaliga ah, Ka tagida naxariis, naxariis iyo duco, bisha barakeysan ee Ramadaan-i Sharif; qaran ahaan, waxaan gaarnay isku soo dhaweyn aad u balaaran. naxariis, [More ...]
Midabada qaansoobka ah ee metro duruufta Bosphorus wuxuu noqday midab
Midabada qaanso-roobaadka ee xarunta tareenka ee Bosphorus waxay noqotay monochrome: Midabada qaansoroobaadka ee jaamacadda Levent-Boğaziçi waxay ku iftiimisay monochrome iyada oo midabada midabada qaanso roobaadka loogu talagalay 2 sano ee Levent-Boğaziçi University oo leh khadka M6 ee Istanbul. [More ...]
Farriinta ka socota Kurt, Maareeyaha Guud ee Gaadiidka TCDD Inc. Ramadaan Ramadaan: Mid ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan ee innaga yeelaya dhammaan bini-aadamka waa hodannimada diinteena. Ciidaha diinta, wadajirka, wadaaga, jacaylka iyo ixtiraamka ayaa ina siiya dareenkeena midnimada [More ...]
14 oo ka socda wasiirka arimaha gudaha
Wasiirka Gaadiidka iyo Isgaarsiinta: Ahmet Arslan, 14 Juun 22 Khamiista, Dhismaha Demirspor ee Behiçbey, Ankara [More ...]
Gaadiidka rasmiga ah ee rasmiga ah ee Antalya iyo taraamka xayeysiinta fasaxa
Basaska taarikada ee rasmiga ah iyo basaska trolley ee Dowlada Hoose ee Antalya waxay qaadi doonaan muwaadiniinta Antray iyo xafladda taraafikada taraafikada ee bilaashka ah. Degmada Antalya ee Caasimad-weyne, dhaqanka dadku u damaashaadayaan ee si raaxo leh loo fuliyay [More ...]
'' Discount '' Fursad
Ha moogaan Fursada Sicir-dhimista ee booqashooyinka Izmir: Inta lagu jiro Ciidda Ramadaanka, dadka deggan Izmir waxay ku safri doonaan qiime dhimis 50 oo ay ku qaadayaan gaadiidleyda dadweynaha ee Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir. Sidoo kale booqashooyinka xabaasha bilaashka ah [More ...]
Tuulada Eurasia Tunnel Toll Hada Waxaa Laga Helaa Bangiga Garanti: Qolka Eurasian Tunnel, kaas oo fududaynaya gaadiidka sida marinka ugu gaaban ee u dhexeeya labada qaaradood ee Istanbul, wuxuu darawalada siinayaa wada shaqeynta ay bixiso Bangiga Garanti. [More ...]
Karşıyaka 1 July xiiseynta taraamka
Karşıyaka 1 July xiiseynta taraamka: Degmadda Izmir Metropolitan Dowlada Hoose ayaa dhameystirtay dhismaha waxaana ay waday howlo horudhac ah ilaa bishii Abriil Karşıyaka Laga soo bilaabo Juulaay, 1 wuxuu ku socdaa “hawlgal caadi ah oo ku saabsan Tram. 10 daqiiqo oo kala fog [More ...]
Maanta taariikhda: 24 Juun 1940 Çamlık-Aziziye oo u dhow İzmir
Taariikh Maanta 24 Juun 1940 Jidka Tareenka ee loo yaqaan 'Çamlık-Aziziye' ayaa laga furay meel u dhow İzmir.